Maraykanka, 09 January 2019
Arbaco 9 January 2019
Maraykanka oo qaaday weerarkii shanaad sannadkan
Maraykanka ayaa sii kordhiyey duqaymaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab tan iyo intii uu bilowday sannadka cusub. siddeeddii maalmood ee ugu horraysay sannadkan ayaa Maraykanku ay durba qaadeen shan weerar oo kala duwan oo lala beegsaday Al-Shabaab.
Manafort oo xog siiyey nin ku xiran sirdoonka Ruushka
Madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump, Paul Manafort ayaa xog ku saabsan codadka ra’yiga dadweynaha la wadaagay qof xiriir la leh sirdoonka Ruushka, sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyey talaadadii.
Trump oo jeediyey khudbad uu ku dalbanayo darbi
Madaxweynaha Maryakanka Doland Trump ayaa khudbad uu jeediyey kaga hadlay amniga xuduudda koonfureed ee Maraykanka. Waxa uu sheegay in muhaajiriinta sharci-darrada ah ee Maraykanka imanayaa ay khatar ku hayaan nolosha iyo dhaqaalaha dadka Maraykanka ah.
Wareysi Gaar ah: Ilhan Omar
Ilhan Omar oo asal ahaan ka soo jeedo Somalia, noqotayna gabadhii ugu horaysay ee ku guulaysta xubinimada aqalka hoose ee Congresska, iyada oo xijaaban maalin kadib dhaarteedii, ayaa waxay waraysi gaar ah siisay laanta afsoomaaliga ee VOA.
Aqalka Sare oo Hakiyay Wada-shaqeynti Aqalka Hoose
Aqalka Saree ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqey in ay hakiyeen wadashaqeyntii ay la lahaayeen Aqalka Hoose ama golaha shacaba, ka dib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wadashaqeyneed ee labada Aqal ee Barlamanka.
Ilhaan Cumar oo loo dhaariyey Koongareeska Maraykanka
Arrin taariikhi ah ayaa Ilhaan Cumar oo laga soo doorto gobolka Minnesota waxay noqotay gabadhii ugu horraysay ee hore u ahana jirtay qaxooti ee ka mid noqota Aqalka Koongareeska Maraykanka.
Turkiga iyo Mareykanka oo ka hadlaya Gulen
Wakaaladda wararka Turkiga ayaa maanta sheegtay in wafti ka socda Mareykanka ay la kulmayaan saraakiisha Turkiga, ayaga oo kala hadlay codsiga Ankara ee ah in loo soo masaafuriyo wadaadka Turkiga ee Mareykanka ku nool, Fethullah Gulen.
USA: Xubnaha Kongereeska oo Maanta la Dhaarinayo
Dadka maanta la dhaarinayo waxaa ku jira Ilhan Omar oo ka mid ah labo haween ah oo Muslin ah oo markii u horreysay xubin ka noqda Aqalka Hoose ee Kongereeska Maraykanka
Trump iyo Kongereeska oo Is-mari la'
Kulan ay Arbacadii shalay yeesheen Trump iyo madaxda labada xisbi ayaa ku dhamaaday guul la’aan, iyaga oo isku mari waayey xalkii furidda hawlaha dawladda ee xayiran.
Goobaha dalxiiska ee Washington oo xirmay
Dadka usoo dalxiiska taga magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka ayaa maanta la kulmi doona inay xiran yihiin goobaha soo jiidashada leh, sababo la xiriira hakadka ku yimid qeyb ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka.
Ruushka oo xiray muwaadin Mareykan ah
Ruushka ayaa magaalada Moscow ku xiray muwaadin Mareykan ah oo ay ku eedeeyeen inuu basaas yahay, sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka.
Qeyb ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka oo weli hakad ku jira
Hakadka ku yimid qeyb ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka ayaa maanta galay maalintii tobanaad ayada oo aysan muuqaan xilli ay taasi dhammaan doonto.